DISTRIKAN’I BEROROHA : Lehilahy iray matin’ny fitsaram-bahoaka tany Maroto – Vaovao Madagasikara
Mirongatra hatrany ny fitsaram-bahoaka. Lehilahy iray indray no maty tsy tra-drano noho ny hetezeran’ny fokonolona tany Maroto, tanàna kely iray, 28km ny Distrikan’iI Beroroha.15 novembre 2016
Nandà ny fisamborana azy izy ka io no voalaza fa nampirehitra ny hatezeran’ny olona ka nahatonga ny fitsaram-bahoaka avy hatrany.
Ny faran’ny herinandro lasa teo iny no no nisehoan’ity tranga ity tany an-toerana. Araka ny vaovao voaray, nisy roa lahy samy mbola tanora vao erotrerony, izay voalaza fa mpinamana ihany no vaky ady tao an-tanàna. Naharay hazo be ny iraikalahy rehefa tsy nahatsindry fo ka avy hatrany dia novelesiny tamin’izany ny tampon-dohan’ity nifamaly taminy.
Maty tsy tra-drano ilay niharan-doza vokatr’izany, ilay nikapoka kosa tsy namelan’ny fokonolona tao an-tanàna fa avy hatrany dia nosamborin’izy ireo na dia niezaka nitsoaka ihany aza.
Nokasain’ny olona noentina teo anatrehan’ny Dinabe ilay nahavanon-doza mba hanaovana kabary kanefa nandà hatramin’ny farany izy no mbola nikiribiby nitsoaka ihany. Io no nampirehitra ny hatezeram-bahoaka.
Nofatoran’izy ireo ilay lehilahy ary samy nidaroka nanala ny fony teo avokoa ny rehetra. Rapa tanteraka ny tavany sy ny vatany iray manontolo, goavana ny ratra ity farany ka io no nitarika ny fahafatesany teo noho eo.
Taorian’io vao nahazo antso ny Zandary. Fatin’olona miisa roa izany no indray novantanin’ireo mpitandro filaminana teny an-toerana. Misokatra ny fanadihadiana ataon’ny zandary amin’izao fotoana izao.